K: နှလုံးသား နဲ့ လုပ်တဲ့ နိုင်ငံရေး
ဟီလာရီ ကလင်တန် ရဲ့ Hard Choice စာအုပ်က ၊ အာရှပစိဖိတ် နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အရှေ့ဖက် အခန်းတွေ ဖတ်ပြီးသွားတဲ့ အခါ ၊ ခဏ နားရင်း ၊ စာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ မြန်မာပြည် ခရီးစဉ် က ဓါတ်ပုံတချို့ကို ပြန်လှန် ကြည့် မိတယ်။ တကယ်တော့ ၊ ဒီ ဓါတ်ပုံတွေဟာ ၊ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ် လောက် ကတည်းက စိတ်လှုပ်ရှား ကြည်နူးစွာ နဲ့ အထပ်ထပ် အခါခါ မြင်ဖူး ကြည့်ဖူး ခဲ့ ပြီးသား တွေ ပါ။ အခု ဟီလာရီ ကိုယ်တိုင် ပြောပြ တော့မှ ၊ ဒီပုံရိပ် တွေနဲ့ အပြုံးတွေ ရဲ့ နောက်ကွယ်က ခြေလှမ်းတွေ စိတ်ခံစားချက် အတွေးတွေ ကို ၊ အသေအချာ ပြန်ပြီး ဆက်စပ် ထင်ဟပ် ကြည့်နိုင် ရ တော့ တယ်။
တကယ်ဆိုတော့ ၂၀၀၉ ခုနှစ် မှာ ဟီလာရီ ကလင်တန် ၊ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဖြစ်လာခဲ့တာ နဲ့ မရှေးမနှောင်းမှာပဲ ၊ မြန်မာပြည်မှာ ၊ဘယ်လိုမှ မျှော်လင့် မထား တဲ့ နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲ တွေ ဖြစ်လာခဲ့တာဟာ ၊ တိုက်ဆိုင်မူ သက်သက်တော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူး ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ လူကိုယ်တိုင် မျက်နှာချင်းဆိုင် တွေ့ ခဲ့ ဆုံခဲ့ ရတဲ့ အဖြစ်အတွက် ၊ သူ့ ကိုယ်သူ ဆိတ်ဆွဲကြည့်မိ မတတ်ပဲ လို့ ဟီလာရီက တင်စားခဲ့သလို ပဲ -- ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားတွေ မှာလည်း ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရုတ်တရက် လွတ်မြောက်လာမူ ၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ တသုတ်ပြီး တသုတ် လွှတ်ပေးမူ တွေက စလို့ ၊ ရာစု နှစ် တ၀က် လောက် သံတမန် ဆက်ဆံရေး အေးစက် ခဲ့တဲ့ အမေရိကန် နိုင်ငံကြီးကနေပြီး ၊ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး နဲ့ သမ္မတ ကိုယ်တိုင် ရှေ့ဆင့် နောက်ဆင့် ရောက်လာခဲ့တဲ့ အဖြစ်တွေဟာ ၊ ကိုယ့်အသားကိုယ် ပြန်ဆိတ်ကြည့်ရ မတတ် မယုံနိုင်စရာ သမိုင်းအချိုးအကွေ့ တွေ ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ရန်ကုန်မြို့ ရဲ့ လမ်းတွေပေါ်မှာ ၊ အမေရိကန် အလံ ကို ဝှေ့ယမ်းပြီး သမ္မတ အိုဘားမား ကို ကြိုဆို နှုတ်ဆက်ခဲ့ ကြတဲ့ ၊ မြန်မာပြည်သား တွေကို ဘယ်တုန်းကနဲ့ မှ မတူတဲ့ ၊ လှိုက်လှဲမူ စစ်စစ် တွေနဲ့ တွေ့ ခဲ့ ကြ ရတာပါ။
ဒီ သမ္မတ နဲ့ အတွင်းရေးမှူး နှစ်ယောက် အတွဲ ကလည်း ၊ သူ့နိုင်ငံမှာတင်မက ၊ ကမ္ဘာမှာကို ထူးထူးခြားခြား သူများထက်ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားခံရ ၊ နှစ်သက်သဘောကျခံရတဲ့ သူတွေ ။ ပါတီနိုင်ငံရေး စင်မြင့်ပေါ်မှာ သူတို့ နှစ်ယောက် အပြင်းအထန် ယှဉ်ပြိုင် ထိုးနှက် ခဲ့ကြတဲ့ မြင်ကွင်းကိုလည်း တကမ္ဘာလုံး မကြည့်ချင်မှ အဆုံး မြင်ခဲ့ ပြီးသား ။ ပြီးတော့လည်း ဘာမှ မဖြစ်ခဲ့ကြ သလို ၊ ကမ္ဘာ့အရေးတွေကို နှစ်ယောက်သား ပခုံးတဖက်စီ ထမ်းပြခဲ့ရင်း ၊ ဒီမိုကရေစီ ရဲ့ အလှတရားကို ပြသ ခဲ့ကြတာလည်း အားလုံးအသိ ။ အဲဒီလို ပြသ နိုင်ခဲ့ တာဟာလည်း ၊ သူမ ရဲ့ ခက်ခဲတဲ့ ရွေးချယ်မူ အစ အဦး တခု ပဲ ဆိုတာကို ၊ Hard Choice စာအုပ်ရဲ့ ပထမဆုံး အခန်း ဖြစ်တဲ့ A Fresh Start - အသစ်က ပြန်စ ခြင်း ဆိုတာမှာ ၊ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဖွင့်ဟ ရေးသားထား တယ်။ ဒီစာအုပ်ကြီး တအုပ်လုံးမှာ ၊ အာရှ နဲ့ ပစိဖိတ်က စ - ဖွင့်လို့ ၊ အာဖဂန်နစ္စတန် နဲ့ အီရတ် အလယ် ၊ ရုရှ နဲ့ ဂါဇာ အဆုံး ၊ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး တယောက် အဖြစ် သူ သွားခဲ့တဲ့ နိုင်ငံပေါင်း ၁၁၂ နိုင်ငံ ရဲ့ ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်း တွေကို ဇာတ်စုံ ခင်းပြီး သွားလို့ နိဂုံး ချုပ် လိုက်တဲ့ အခန်း မှာတောင် ၊ အိုဘားမား နဲ့ မြန်မာပြည် ဆိုတဲ့ အမည် နှစ်ခု ဟာ သူ့ အတွက် ပထမဆုံး သုံးသပ် အမှတ်ရစရာ ဖြစ်နေလေ တယ်။ အမှတ်ရ စရာ ကောင်းရအောင်လည်း ၊ မြန်မာပြည် ခရီးစဉ်ဟာ ၊ ထူးခြား တိုက်ဆိုင်စွာပဲ ၊ သူတို့ နှစ်ယောက် အတွက် ၊ ပခုံးအတူထမ်း ၊ ခြေလှမ်းအတူယှဉ် လို့ နောက်ဆုံး ထွက်ခဲ့ ကြရတဲ့ ၊ ခရီစဉ် လည်း ဖြစ်နေခဲ့သည် ကိုး ။
ရန်ကုန်မြို့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ ခြံထဲမှာ သမ္မတ အိုဘားမားက ၊ အိမ်ရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ အတူ နှုတ်ဆက် မိန့်ခွန်းပြောရင်း ၊ ဟီလာရီ ဘယ်မှာလဲ လို့ လူတွေ ကြားထဲ မျက်လုံးဝှေ့ ရင်း အရေးတကြီး သူ့ကို ရှာတဲ့ အကြောင်းလေး ကို ပြန်ပြောင်း အစချီရင်း ၊ လွန်ခဲ့တဲ့ လေးနှစ်က သူတို့ နှစ်ယောက် ရဲ့ ဆက်ဆံရေးဟာ ၊ အခုအချိန်မှာတော့ နာကျင်ပျော်ရွှင် လွမ်းဆွတ်စရာ ဖြစ်ခဲ့ ပြီ လို့ ဆိုတယ်။ သမ္မတ အိုဘားမား က ၊ လူအုပ်ကြီးထဲမှာ ဟီလာရီ ကို အသည်းအသန် ရှာခဲ့တာဟာ တခြားကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာပြည်အရေးအတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ၊ မျက်လုံးခြင်းဆုံပြီး ၊ လူသိရှင်ကြား ဂုဏ်ပြု ပြောကြားချင်လို့ပါ ။ ဟီလာရီ ကလည်း မြန်မာပြည် ခရီးစဉ်က အပြန် Air Force One လေယဉ်ပျံကြီး ပေါ်မှာ ၊ သမ္မတ အိုဘားမားက သူ့ရုံးခန်းထဲ ခေါ်ပြီး နောက်ထပ် လေးနှစ် သက်တမ်း ထပ်မံ တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ ဆန္ဒတောင်းတဲ့ အခါ ၊ မပြီးမပြတ်သေးတဲ့ သူ့ ရဲ့ သံတမာန်ရေးရာ ကိစ္စ တွေကို တွေးလိုက်တော့ ၊ မြန်မာပြည် မှာ ၊ ဒီမိုကရေစီ ဘယ်လို ဆက်ဖြစ်လာပါ့မလည်း ဆိုတဲ့ ၊ စိုးရိမ်မူ က ပထမဆုံး အတွေး ဖြစ်နေ ပြန်တယ်။ တကယ်တော့ ၊ ဒီ စာအုပ်ကို ဖတ်မိသလောက် ခြုံငုံ သုံးသပ်ကြည့်တဲ့ အခါမှာ ၊ မြန်မာပြည် အရေး ဟာ ၊ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒ တခု သက်သက် ထက် ၊ ဟီလာရီ နဲ့ တစုံတရာ နက်နက်ရှိုင်း ရှိုင်း ယှက်နွယ်နေတယ် ဆိုတာကို ခံစား သတိထား မိလာတယ်။
အမေရိကန် အစိုးရ ရဲ့ Pivot Strategy ဆိုတဲ့ အာရှ ပစိဖိတ်ဒေသ ကို မဏ္ဍိုင်ပြုမဲ့ နည်းဗျူဟာသစ် ဟာ ၊ ဟီလာရီ ရဲ့ အဆိုအရ ဆိုရင် ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အဖြစ် ၊ သူ ပထမဆုံး ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ အာရှ ခရီးစဉ်က အစပြုခဲ့တယ်လို့ ဆိုတယ်။ ဘွတ်ရ်ှအစိုးရ ရဲ့ မပြီးပြတ်သေးတဲ့ အီရတ် အာဖဂန်နစ္စတန် စစ်တွေ၊ အယ်ကိုင်ဒါ အကြမ်းဖက်အန္တရယ်တွေ ကို ပိုပြီး အာရုံရောက်ဖို့ ရှိနေတဲ့ နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒ ဟာ ၊ မထင်မှတ်ပဲ အာရှ နဲ့ စပြီး တာထွက်ခဲ့တယ်။ ခြိမ်းခြောက်မူ တွေကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေရပေမဲ့ ၊ အခွင့်အလန်း တွေကိုလည်း အမိအရ ဆုပ်ကိုင်သင့်တယ် လို့ ဟီလာရီက ဆိုတယ်။ တချို့ကတော့ ၊ အာရပ်ကမ္ဘာ နဲ့ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ ကျဆင်းလာတဲ့ ဒီမိုကရေစီ အလားအလာတွေ ကြောင့် ၊ ပိုပြီး ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ အရှေ့တောင်အာရှ ဖက်ကို အားပြု လာတာ လို့ ယူဆကြတယ်။ တကယ်တော့ တရုတ်ရဲ့ ကြီးထွားလာမူ ဟာ ၊ အဓိက အကြောင်းရင်း ဖြစ်မှာပါ ။ ဟီလာရီ ကိုယ်တိုင်ကလည်း သူတို့ စဉ်းစားထားတဲ့ လမ်းကြောင်း နှစ်ခု ကို ၊စာအုပ်ထဲမှာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပဲ ချပြ ထားပါတယ်။ ပထမ လမ်းကြောင်းက ၊ တရုတ်နဲ့ ဆက်ဆံရေး တိုးချဲ့ ပြီး သူတို့လိုချင်တဲ့ လမ်းကြောင်းမှန် ပေါ် ရောက်အောင် ဆွဲခေါ်မယ် ။ အဲဒီလိုမှ မဖြစ်နိုင်ရင် ၊ အမေရိကန် ရဲ့ နဂိုမူလ မဟာမိတ် တွေ ဖြစ်တဲ့ ဂျပန် ၊ တောင်ကိုရီးယား၊ ထိုင်း ၊ ဖိလစ်ပိုင် နဲ့ သြစတြေလျ တို့ နဲ့ ပိုပြီး ဆက်ဆံရေး ခိုင်မာအောင် လုပ်မယ် ၊ ဒါမှ တရုတ်ကို ထိမ်းညှိ နိုင်မယ်ပေါ့ ။ ပြီးရင်တော့ ကျွဲကူးရေပါ တခြား အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံတွေကိုပါ ပိုပြီး စည်းရုံးနိုင်မယ် လို့ တွက်ဆပုံရပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်လည်း ၊ အရင်က ဘယ်အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမှ အရေးတယူ မလာရောက်ခဲ့တဲ့ ၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဂျကာတာ မြို့က အာဆီယမ် ရုံးချုပ်ကို ဟီလာရီ ပထမဆုံး အလည်အပတ်ရောက် ခဲ့တယ်။ အဲဒီ ခရီးစဉ်မှာပဲ အင်ဒိုနီးရှား သမ္မတ ယူဒုိုယူနို က၊ မြန်မာပြည်က စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ ဟာ၊ အမေရိကန် နဲ့ ဆက်ဆံချင်နေကြောင်း ၊ ဒီမိုကရေစီလမ်းပွင့်ဖို့ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း စကားပါး လာခဲ့တယ်။ စကားပါးလာသူ ကိုယ်တိုင်က စစ်ဝတ်စုံ ကို ၊ ချွတ်လဲ ထားတဲ့ သမ္မတ တယောက် ဖြစ်နေတာမို့ ၊ အတော် ချိန်ဆ ခဲ့ရတယ်လို့ တော့ မှတ်ချက်ပြု ထားတယ်။ တကယ်တော့ ကြိုတင် တီးခေါက်ထားတဲ့ သံတမန်လမ်းကြောင်း တွေလည်း ရှိထားခဲ့ လို့ ဖြစ်မှာပါ။
မြန်မာပြည် အခြေအနေ နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မချင့်မရဲ ဖြစ်နေခဲ့ ရတယ် ဆိုတဲ့ ဟီလာရီ ဟာ ၊ ပထမဆုံး အာရှ ခရီးစဉ် မစခင်၊ လ အနည်းငယ် အလိုမှာတည်းက ၊ မြန်မာပြည်အပေါ် ပိတ်ဆို့အရေးယူမူကို ဦးဆောင်ရှေ့ရွက် ပြုနေတဲ့ လွှတ်တော်အမတ်တွေ နဲ့ စပြီး ကြိုတင် ညှိုနှိုင်းနေ ခဲ့ တယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပေါ်မှာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး လေးစားမူ အတော်များတဲ့ ၊ ပြိုင်ဘက်ပါတီက ရီပက်ဘလစ်ကန် အမတ် မစ်ခ်ျမက်ကော်နယ်က စလို့ ၊ သူ့အနေနဲ့ ဒီလောက်ကြီး သဘောအကျလှကြီး မဟုတ်ပေမဲ့ ၊ အရှေ့တောင်အာရှ ကို ဦးစားပေး လုပ်ဆောင်နေ တဲ့ ခပ်လည်လည် ဒီမိုကရက် အမတ် ဂျင်မ်ဝဘ် လို လူမျိုးအလယ်၊ ကျောက်စိမ်းဥပဒေ လို့ လူသိများတဲ့ မြန်မာ့စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့ရေး ဥပဒေ ကို တင်သွင်းခဲ့တဲ့ ကွယ်လွန်သွားတဲ့ လွှတ်တော်အမတ် တွမ်လန်တို့စ် ရဲ့ တပည့်ရင်း ကွန်ဂရက်အဖွဲ့ဝင် ဂျိုးခရော်လေ ဆိုသူတွေ အဆုံး ၊ မြန်မာပြည်ရေးရာ ပေါ်လစီ အသစ်အတွက် ၊ လွှတ်တော်ထဲမှာ မဟာမိတ်ရှာ လူစု နေခဲ့ပြီ။ မြန်မာအစိုးရ အပေါ်မှာ ပိတ်ဆို့မူ တခုတည်း နဲ့ ဆက်သွားနေလို့ မရတော့ဘူး ဆိုတဲ့ လမ်းကြောင်းကို ၊ စပြီး အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ကြိုးစားနေခဲ့ပြီ။
တကယ်တော့ ၊ သူ့မှာ နဂိုမူလတည်းက ၊ မြန်မာပြည်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သီးသန့် စိတ်ညွတ်မူ တခု ရှိနေခဲ့ ပုံ ပါ။ သူ့ ခင်ပွန်း ဘီလ်ကလင်တန် သမ္မတဖြစ်စဉ် အချိန်ကတည်းက ၊ အမေရိကန် ဒီမိုကရက် တွေ အနေနဲ့ ၊ မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီ အရေးကို အတော့်ကို စိတ်ဝင်စားခဲ့ ကြတာ မဟုတ်လား ။ ၁၉ ၉ ၅ ခု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဒုတိယအကြိမ် အကျယ်ချုပ်က လွတ်လာတဲ့အခါ ၊ တကယ်ပဲ ပြုပြင်ပြောင်းလဲနေပြီလား လို့ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး မယ်ဒလင်း အောဘရိုက် ကိုယ်တိုင် မြန်မာပြည် ကို ရောက်လာ စုံစမ်းခဲ့သေးသည်ပဲ ။ မြန်မာ့အလင်း တို့ ကြေးမုံ တို့ မှာ ကလိန်တန် တို့ ဒေါ်မယ်ဒလင် တို့ ဆိုတဲ့ အောက်ကလိအာ အစိုးရ အာဘော်ဆောင်းပါးတွေ လှိုင်လှိုင် ပါ ခဲ့တဲ့ အချိန်တချိန်ကို မှတ်မိကြအုံးမှာပါ ။ အမေရိကန် ရဲ့ အားထုပ်မူ မအောင်မြင်ခဲ့ဘူး ဆိုပါတော့ ။ ဒါတောင် ကလင်တန်က သမ္မတ ရာထူးက ဆင်းကာနီးလေးမှာ သမ္မတ ရဲ့ အမြင့်ဆုံး အရပ်သားဆု ဆိုပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို မရ အရ ဆုပေးသွား ခဲ့သေးတယ်။ အခု အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒ တွေ၊ ဟီလာရီ ကလင်တန် လက်ထဲ ရောက်လာပြန်တော့ ၊ မြန်မာပြည် နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟာ၊ ရှေ့ဆုံးနားကနေ ပါခဲ့ပြန်တာ အဆန်းတော့ မဟုတ်ပေဘူး။
ပထမဆုံး အာရှ ခရီးစဉ်က ပြန်ရောက်လာလာခြင်းပဲ ၊ မြန်မာပြည်ကို အဆင့်မြင့် အရာရှိ တယောက် လွှတ်လိုက်ပေမဲ့ ၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ နဲ့ တွေ့ခွင့် မရသလို ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့လည်း မတွေ့ခဲ့ရဘူး။ ဒီကြားထဲမှာ ဖြစ်လာတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံသား ယက်တော ရဲ့ ကိစ္စဟာ သွေးရိုးသားရိုး အရူးထခြင်းလား ၊ နိုင်ငံရေး ပယောဂ တခုခု ပါဝင်နေလေသလား ဘယ်သူမှ သေချာ မသိနိုင်ပေမဲ့ ၊ ယက်တောကို လာခေါ်တဲ့ လွှတ်တော်အမတ် ဂျင်မ်ဝဘ် တယောက် သူ့ရဲ့ ဒုတိယ အကြိမ်မြောက် ခရီးစဉ်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ တွေ့ခွင့် ရခဲ့ပြီးနောက်မှာ လမ်းကြောင်း နည်းနည်းပွင့်လာခဲ့တယ်။ နောက်နှစ် ၂၀၁၀ နှစ်ဆန်းပိုင်း ထဲမှာပဲ ၊ အာရှ နဲ့ ပစိဖိတ်ရေးရာ ဗျူရို လက်ထောက် ကတ့်ကမ့်ဘဲလ် ကိုယ်တိုင် နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် လာရောက်ခဲ့ပြီး ၊ နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ကျနေဆဲ ဖြစ်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးနိုင် ခဲ့တယ်။ နှစ်ကုန်ပိုင်း နိုဝင်ဘာလ ထဲမှာတော့၊ စိတ်ကြိုက်ရေးဆွဲထားတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံကြီးနဲ့ တဖက်သက် ကျင်းပခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကြီးမှာ ၊ ပြိုင်ဖက်မရှိ အနိုင်ယူ လိုက် တဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေဟာ ၊ ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးသွား လို့ အစိုးရတွေ လွှတ်တော်တွေ၊ လူခွဲပြီး အကျအန နေရာယူ ပြီး တာနဲ့ တပြိုင်နက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွှတ်ပေးလိုက်တော့တယ်။
ဒီဆက်တိုက် ဖြစ်စဉ်တွေကို ကြည့်ရင် ၊ ဒီ နှစ်ပိုင်းလေး အတွင်းမှာ ၊ အမေရိကန်ဖက်က သံတမန်ရေးရာ အပေးအယူ နဲ့ ညှိနှိုင်းမူတွေ ၊ ဘယ်လောက်တောင် အကြိတ်အနယ် လုပ်ခဲ့ရတယ် ဆိုတာကို ခန့်မှန်းကြည့်လို့ ရသလို မြန်မာအစိုးရ ဖက်ကလည်း အားလုံးကို အချိန်ကိုက် မဖြစ်ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာပဲ ။ အဲဒီမှာ ဘာထပ်တွေ့ရလည်း ဆိုတော့ ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကျယ်ချုပ်ရှိနေတုန်း အဆက်အသွယ် ပြတ်တောက်ခဲ့ပုံ ရတဲ့ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ သမိတ်မှောက် ရေး မူ ဟာ၊ အမေရိကန်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အတွက် ဆောင်ရွက် ပံ့ပိုးနေမူတွေ နဲ့ ၊ အချိတ်အဆက် လွဲချော်ခဲ့ဟန် ရှိတာကြောင့် ၊ ပြည်သူတွေ မှာ ၊ အံ့အားသင့်စရာ နိုင်ငံရေး အလှည့်အပြောင်းတခု ကို ကြုံတွေ့ လက်ခံ လိုက်ရတာပဲ ။ အဲဒါကတော့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကို ရတဲ့ အနေအထား နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၀င်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ ခြင်းပဲ ။ ဒါကို နိုင်ငံရေးထောင်ချောက် လို့ တချို့က သံသယကြီး ကြပေမဲ့ ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကတော့ ၊ နောက်တခါ ထပ်ပေါ်လာနိုင်ဖို့ မလွယ်တဲ့ နိုင်ငံရေး အခွင့်အလန်းတခု မို့ ၊ ရဲရဲ ကြီး တိုးဝင် ခဲ့ ဟန် တူပါတယ်။ ဟီလာရီ ကလည်း မိုးရွာတုန်း ရေခံ သင့်တယ်ဆိုပြီး မြန်မာစကားပုံ နဲ့ ကို အတိအကျ ကိုးကားခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ၊ ဟီလာရီ ရော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပါ ၊ တဖက်မှာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေရဲ့ အရူးလုပ်ခံရဖွယ် ရှိနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ စွန့်စားမူ ကို မျက်စိ ရှင်ရှင် ထား ခဲ့ ကြတာကတော့ ၊ အားတက်စရာပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ တယ်လီဖုန်း ငါးကြိမ်တိုင်တိုင် ပြောခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ဟီလာရီ ဟာ ဒေါ်စု လွတ်ပြီးပြီးချင်း နှစ်လအကြာမှာ ပထမဆုံး အကြိမ် တယ်လီဖုန်း ခေါ်ခဲ့တယ်။ ဒေါ်စုက ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောရင်း နဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး သူ့သမီးရဲ့ မင်္ဂလာဆောင် သတင်းကို မေးခဲ့သလို ဟီလာရီ ကလည်း ကမ္ဘာတလွှားက တခြား ဒီမိုကရေစီ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားမူတွေရဲ့ နမူနာယူစရာ တွေကို ဆွေးနွေးဝေမျှ ချင်တဲ့အကြောင်း ၊ တယောက်တလှည့်စီ အလည်လာကြဖို့ လို့ ချိန်းချက်ခဲ့ကြ တယ်။ အဲ့ဒီလို နဲ့ ဟီလာရီ တယောက် မြန်မာပြည်ကို ကိုယ်တိုင်သွားဖို့ လမ်းစ ရှာတော့တယ်။
၂၀၁၁ နိုဝင်ဘာ လဆန်းမှာ ၊ အမေရိကန် ရဲ့ ဘယ်သမ္မတ မှ မတက်ရောက်ဖူးသေး တဲ့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဘာလီ မှာ လုပ်တဲ့ APEC အစည်းအဝေးကို ဟီလာရီ နဲ့ အတူ အိုဘားမား ကိုယ်တိုင် ပထမဆုံး အကြိမ် တက်ရောက် လာခဲ့ တယ်။ အင်ဒိုနီးရှားကို ဦးတည် ပြန်သန်းလာတဲ့ Air Force One လေယဉ်ကြီးပေါ်မှာပဲ ၊ ဟီလာရီ က ၊ အတူပါလာတဲ့ ကတ့်ကမ်ဘဲလ် ကို ဖုန်းချိတ်ခိုင်းပြီး ၊ မြန်မာပြည် ဖြေလျှော့ ဆက်ဆံ ရေး - ပေါ်လစီသစ် ကို ဆုံးဖြတ် အတည်ပြုပေးမဲ့ အမေရိက နိုင်ငံရဲ့ အရေးကြီးဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး နဲ့ ၊ ဒီပေါ်လစီ ကို ထောက်ခံ အတည်ပြုပေးဖို့ လိုအပ်နေတဲ့ မြန်မာပြည်က တဦးတည်းသော အမျိုးသမီးကြီး တို့ ကို ၊ ပထမဆုံး အကြိမ် စကားပြောစေ ခဲ့တော့တယ်။ နောက်တနေ့ ဘာလီ အစည်းအဝေး မှာပဲ ၊ သမ္မတ အိုဘားမား က မြန်မာပြည်မှာ တိုးတက်မူ အလင်းရောင်ကလေးတွေကို မြင်နေရပါပြီ ဆိုတဲ့ flickers of progress မှတ်ချက် စကား ကို ဆိုတော့တယ် ။ သူ့ဘေးမှာ ရပ်နေတဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီ ကိုလည်း မြန်မာနိုင်ငံကို လွှတ်ပြီး စုံစမ်းကြည့်ရှု ဖို့ တာဝန်ပေးလိုက်တယ် လို့ တခါတည်း ကြေညာ ခဲ့တယ် ။ ဘာလီက အပြန် ၊ ဂျပန်မှာ ဆီဝင်ထဲ့ ရင်း ၊ ဂျပန်က သံဝန်ထမ်း တွေက ထဲ့ပေးလိုက်တဲ့ ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကြောင်း ရိုက်ကူးထားတဲ့ The Lady ရုပ်ရှင်ကို သူတို့ တဖွဲ့လုံး လေယဉ်ပေါ်မှာ ကြည့်ကြရင်း ၊ ဟီလာရီ တယောက် သမ္မတကြီး မြင်လိုက်တဲ့ အလင်းရောင် မီးတောက်ကလေး တွေကို ၊ အားကောင်းလာအောင် ဘယ်လို ယပ်ခတ် မီးထိုး ပေးရမလဲ လို့ တွေးရင်း ၊ ၀ါရှင်တန် ပြန်မရောက်ခင် မှာပဲ ၊ နောက်ခရီးစဉ် အတွက် ပြင်ဆင် စိတ်လှုပ်ရှားနေခဲ့ ပြီ။
တကယ်လည်း ၊ လ တောင် မကူးသေးတဲ့ နိုဝင်ဘာ နေက်ဆုံးရက်ထဲ မှာပဲ ၊ ဟီလာရီ တယောက် နေပြည်တော်ကို ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက် ရောက်လာခဲ့တော့တယ်။ ကြီးကျယ်ခမ်းနား လှတဲ့ နေပြည်တော် ရဲ့ မြင်ကွင်း တွေ ၊ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ၊ စာအုပ်ထဲ မှာ ခပ်သာသာ ခပ်သောသော လေးသာ မှတ်ချက်ပြုထားပေမဲ့ ၊ ယိုယွင်း အကျည်းတန်နေတဲ့ အဆောက်အဦကြီးတွေ အောက်က ခက်ခဲရုန်းကန် နေကြတဲ့ ရန်ကုန်မြို့ ရဲ့ လူမူမြင်ကွင်းတွေကို တော့ ၊ လေးလေးနက်နက် ခံစား နားလည် နေခဲ့ပုံ ။ ရှုခင်းတွေ စုံလင် လှ တဲ့ မြန်မာပြည်ကြီးကို ၊ သူ့မိသားစု နဲ့ အတူ ၊ ဧရာဝတီမြစ် အတိုင်း ဆန်တက်လို့ မန္တလေးထိ အရောက် နောက်တခေါက် ထပ်လာလည်ဖို့ ကိုတောင် ၊ ဆန္ဒတွေ ပြင်းပြနေခဲ့တယ် လို့ ဆိုတယ်။
နောက်ဆုံးမှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ လူကိုယ်တိုင် မျက်နှာချင်းဆိုင် တွေ့ ရပါ လေပြီ။ အမေရိကန် သံအမတ်ရဲ့ နေအိမ်မှာ လုပ်တဲ့ ညစာစားပွဲ မှာ ၊ နှစ်ယောက်သား မထင်မှတ်ပဲ ၊
အကျီ င်္ အဖြူရောင် ဆင်တူ ၀တ်လာမိကြတဲ့ တိုက်ဆိုင်မူ အတွက် အံ့သြ၀မ်းသာနေကြ တဲ့ အမျိုးသမီးကြီး နှစ်ယောက်ဟာ ၊ စတွေ့လိုက်တာ နဲ့ ၊ ငယ်ပေါင်းကြီးဖော် မိတ်ရင်း ဆွေရင်းတွေလို ခံစားကြရတယ် ဆိုတာဟာ ၊ ဓါတ်ပုံတွေ ထဲမှာကို အတိုင်းသား မြင်နိုင်ပါတယ်။ လက်ဆောင်တွေ တယောက်တလှည့် ပေးကြပြီးတဲ့ နောက်မှာတော့ ဟီလာရီ က သူ နေပြည်တော်မှာ တွေ့ခဲ့တဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နှစ်ယောက် အပေါ် အမြင်တွေကို ပြောပြ သလို ၊ ဒေါ်စု ကလည်း ၂၀၁၂ မှာ လုပ်မဲ့ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ ကို ၊ သူတို့ ပါတီ ၀င်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ အကြောင်း ၊ သူ ကိုယ်တိုင် လွှတ်တော်အမတ် လုပ်ဖို့ လည်း ရည်ရွယ်ထားကြောင်း ပြောရင်း ၊ ပြည်သူ့ ကိုယ်စားလှယ် တယောက် ဖြစ်လာဖို့ လိုအပ်တဲ ပြင်ဆင်မူတွေအတွက် မေးခွန်းတွေ အများကြီး မေးခဲ့တယ် လို့ ဆိုတယ်။
ဒီပုံမှာ ဟီလာရီ ဆွဲထားတဲ့ ငွေဆွဲကြိုးလေးဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ လက်ဆောင်ဖြစ်တယ်လို့ ယူဆရတယ်။ ၊သူက ဒေါ်စု ဖတ်ဖို့ စာအုပ်တချို့ နဲ့ ခွေးကလေးဆော့စရာ တခု ပေးခဲ့ပြီး ၊ ဒေါ်စု ကတော့ သူကိုယ်တိုင် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတဲ့ ငွေဆွဲကြိုးတကုံး ပေးခဲ့တယ် လို့ ရေးထားတယ်
နောက်တနေ့ မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ နေအိမ်မှာ ထပ်တွေ့ ကြပြန်တယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ၊ မြန်မာအစိုးရ က စဉ်းစားနေတဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမူတွေ အတွက် ၊ အမေရိကန် ဖက်ကရော ဘယ်လို တုန့်ပြန် မှာလဲ ဆိုတာကို သိချင်နေခဲ့ တယ် လို့ ဆိုတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့ က ၊ မတိုင်ခင် ကတည်းက ပိတ်ဆို့ မူတွေကို အစောတလျင် မဖယ်ရှားလိုက်ဖို့ ဆိုတဲ့ သတိပေးမူတွေ ရှိ ခဲ့တယ်။ ဟီလာရီ ကလည်း အကုန်လုံးကို တပြိုင်နက်တည်း ဖွင့်ပေးလိုက်တာမဟုတ်ပဲ ၊ တိုးတက်မူ တခုဆီတိုင်းအတွက် အပေးအယူ ပုံစံ နဲ့သာ သွားပါ့မယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စိတ်ချစေခဲ့တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ဒီခရီးစဉ် အားဖြင့် ၊ ဟီလာရီ မျှော်လင့်ထားတဲ့ အတိုင်းပဲ၊ ပြုပြင်ရေးသမား ဆုိုသူကြီးတွေ အတွက်တော့ ၊ နိုင်ငံတကာ ရဲ့ ယုံကြည်မူ ကို ရယူ တည်ဆောက်ဖို့ လမ်းစ ပွင့်သွားခဲ့ လေပြီ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ အတိုက်အခံ တွေ အတွက်ရော ၊ လူးသာ လွန့်သာ ဘယ်လောက် ရှိလာခဲ့သလဲ ။
သူတို့ နှစ်ယောက် ပထမဆုံး ဖုန်းပြောစဉ် က ချိန်းချက်ခဲ့ ကြတဲ့ အတိုင်းပါပဲ ။ ၂၀၁၂ စက်တင်ဘာ လ ထဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တယောက် ၀ါရှင်တန်က ဟီလာရီ ရဲ့ အိမ်ကို တလှည့် အလည်ရောက်လာ ခဲ့တယ်။ ဟီလာရီ ရဲ့ အိမ်က ထမင်းစားခန်း အပြင်က နေရာလေးမှာ နှစ်ယောက်တည်း သီးသန့် စကားပြောရင်း ၊ မလွတ်သေးတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ ၊ ပိုပြီးဆိုးဝါးသလိုတောင် ဖြစ်နေတဲ့ တိုင်းရင်းသား ပဋိပက္ခတွေ နဲ့ ၊ အလုအယက် ၀င်လာကြတဲ့ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံ မူတွေကြောင့် ပိုသိသာလာတဲ့ လဘ်ပေးလဘ်ယူ မူတွေ အကြောင်း ပြောတဲ့ အချိန်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟာ စိုးရိမ်နေဟန် ရှိတယ်လို့ ဆိုတယ်။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အတွက် အတူလုပ်ဆောင်ဖို့ ယုံကြည်ထားခဲ့တဲ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ရဲ့ အပြောင်းအလဲ အတွက် လည်း ၊ ပူပင်နေပုံ ပေါ်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို၊ အံကြိတ်ပြီး တော့သာ ရှေ့ကို ဆက်သွားဖို့ ၊ ပေးစရာရှိတဲ့ ဖိအားကို ဆက် ပေး ပြီး ၊ ထိမ်းစရာရှိတဲ့ ဆက်ဆံရေးကို ဆက်ထိမ်းဖို့ သာ၊ ဟီလာရီက အကြံညဏ် ပေးခဲ့ တယ် ။ အမေရိကကို မရှေးမနှောင်း ရောက်နေတဲ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ရဲ့ အမည်ကို တောင် ၊ နောက်တနေ့ ပြောမဲ့ ဆုယူ မိန့် ခွန်းမှာ ထဲ့ပြောဖို့ ၊ သူ က အကြံ ထပ်ပေးလိုက် သေးတယ်။
ဒေါ်စု အမေရိကန် ခရီးစဉ်က ပြန်လာပြီး သိပ်မကြာပါဘူး။ နိုဝင်ဘာ လ ထဲမှာပဲ ၊ သမ္မတ အိုဘားမား ကိုယ်တိုင် မြန်မာပြည် ကို ရောက်လာခဲ့ ပြီး ၊ တဖြည်းဖြည်း မြင့်တက်လာတဲ့ အမေရိကန် - မြန်မာ ဆက်ဆံရေးဟာ အမြင့်ဆုံးရေချိန် ကို ရောက်ခဲ့ တော့တယ်။
၂၀၁၄ ရဲ့ နှစ်လည်ပိုင်းမှာ ထွက်လာတဲ့ ဟီလာရီ ရဲ့ စာအုပ်ထဲက သူ့ အတွေ့ အကြုံ သူ့ သုံးသပ်ချက်တွေ ကို ဖတ်ကြည့်ရင်း ၊ ဒီ အချိန်ကာလတွေ အတွင်းမှာ ဟီလာရီ မျှော်မှန်းခဲ့ သလောက် မြန်မာပြည် ဘယ်လောက်ထိ ရှေ့ ကို ရောက်လာသလဲ . . . အိုဘားမား သတိချပ်ခဲ့ တဲ့ တိုးတက်မူ မီးရောင်လေးတွေကရော ဘယ်လောက်ထိ ကျယ်ပြန့် လင်းချင်း လာသလဲ ဆိုတာကို ၊ အားလုံး ကိုယ် ထင်မြင် တွေ့ကြုံရသလို သုံးသပ် ကြည့် နိုင်ပါတယ်။
ဒီ ပြောင်းလဲမူတွေကို ဦးဆောင် ရှေ့ ရွက် ပြုခဲ့တဲ့ ဟီလာရီ ကိုယ်တိုင်မှာ တော့ ၊ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် တယောက် သူ့ အလုပ်တွေကို ပြီးပြတ်အောင်မှ ဆက်လုပ်သွား နိုင်ပါ့မလား . . . ဒေါ်စု တယောက်ကများ ယုံကြည်စရာ လျော့ပါးလာတဲ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မူ တွေထဲကနေ ၊ ဗြုန်းဆို နှုတ်ထွက်လိုက်မလား ဆိုတဲ့ ၊ စိုးရိမ်မူ အသစ် တွေ ရှိလာ ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ၊ သူကိုယ်တိုင် တွေ့ဆုံ စကားပြောခဲ့ဖူးတဲ့ ၊ ဦးသိန်းစိန် - ဦးရွှေမန်း- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆိုတဲ့ ၂၀၁၅ မှာ သမ္မတ ဖြစ်လာနိုင်မဲ့ ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး သုံးယောက် ရဲ့ နိုင်ငံရေး အားစမ်းမူ နဲ့ နောက်ကွယ်က ကစားကွက် အလှည့်အပြောင်းတွေကို လည်း ၊ ဒါဟာ တကယ့် ဒီမိုကရေစီ ပါပဲ လို့ ၊ တိတ်တိတ်ကလေး အားရ နေဟန် လည်း ရေးသားထားတယ်။ ဘာပဲပြောပြော အစောပိုင်း ကာလက မြင်ခဲ့ရတဲ့ အလင်းရောင်လေးတွေ နဲ့၊ မရေရာ ခဲ့တဲ့ မျှော်လင့်ချက် တွေ ဟာ ၊ သူ - နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ သက်တမ်း လေးနှစ် အတွင်းက ၊ အမှတ်ရစရာတွေ ထဲ မှာတော့ ၊ အမြင့်ဆုံး အမှတ် တွေ ဖြစ်နေဆဲပဲ လို့ ဆိုတယ်။ အားလုံးက ထင်မြင် မျှော်လင့်နေကြသလို နောက်လာမဲ့ ၂၀၁၆ အမေရိကန် ရွေးကောက်ပွဲ မှာ ၊ သမ္မတ အဖြစ် ထပ်မံ ယှဉ်ပြိုင် အရွေးခံ ဖို့ ဆိုတာကိုတော့၊ နောက်ထပ် ခက်ခဲတဲ့ ရွေးချယ်မူ တခု မို့ ၊ မဆုံးဖြတ်ရသေးဘူး လို့ ၊ ဆိုထားပေမဲ့ ၊ နှလုံးသား နဲ့ နိုင်ငံရေး လုပ်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးကြီး ရဲ့ ၊ နိုင်ငံရေး နှလုံးသားကိုတော့ ဒီစာအုပ်ထဲမှာ အတိုင်းသား မြင်နေခဲ့ရတယ်။
ဟီလာရီ ပြောသလိုဆို - နိုင်ငံရေး တာဝန် တွေ ဆိုတာ လက်ဆင့်ကမ်း ပြိုင်ပွဲ လိုပဲ ၊ ရှေ့က မပြီးပြတ်ခဲ့တဲ့ တာဝန်တွေကို ဆက်ထမ်းဆောင် ၊ အရင်က မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ လမ်းကြောင်းတွေကို ပြောင်းလဲ ရတာ ဆိုရင်တော့ ၊ နောက် အသစ် တက်လာတဲ့ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ဂျွန်ကယ်ရီ က ၊ အခု ဘာတွေ ဆက် လုပ်နေလေသလဲ ။ ပြီးခဲ့တဲ့ လ ကမှ ၊ မြန်မာပြည်ကို လာသွားတဲ့ ဂျွန်ကယ်ရီ ရဲ့ ခရီးစဉ်က တော့ ၊ သူ့ရှေ့က လူတွေလို ၊ မြန်မာပြည်သူတွေ ကြားထဲ စိတ်ဝင်စားမူ မရှိလှဘူး လို့ ပြောကြ တယ်။ ဂျွန်ကယ်ရီ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုတောင် အလေးအနက် မထားသလို အခြေအနေတွေ ဖြစ်ခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ ဖော်ပြ ရေးသားချက်တွေ ကို လဲ ဖတ်မိတယ်။
တကယ်တော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတ ဖြစ်ရေး - မဖြစ်ရေး ဆိုတဲ့ ကိစ္စ ဟာ ၊ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒ ထဲမှာ ၊ သိပ်အရေးပါလှတဲ့ အကြောင်း မဟုတ်လောက်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အမေရိကန် ရဲ့ မြန်မာပြည်အပေါ် ဆက်ဆံရေး မူဝါဒသစ် ဟာ ၊ တရုတ်ရဲ့ ခြေကုပ်ယူမူ ကို တားဆီးဖို့ နဲ့၊ ဒေသတွင်း သြဇာ ထူထောင်ဖို့ သက်သက်ပဲ ဖြစ်လာမယ် ဆိုရင်တော့ ၊ အမျိုးသမီးကြီး နှစ်ယောက် ရဲ့ ခင်မင်လေးစားမူတွေ နဲ့ စခဲု့ ပြီး ၊ အဖြူရောင် တိုက်ဆိုင်မူ နဲ့ လေးနက် ခဲ့တဲ့ ၊ နွေးထွေးပွင့်လင်းတဲ့ ရီမောသံ တွေနဲ့ ဖွဲ့နှောင်ပြီးသား ၊ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခရီး အစ ကောင်းဟာ၊ အနှောင်း မသေချာ နိုင်ပါဘူး။
တကယ်လို့သာ ၊ အားလုံးရဲ့ နှလုံးသား ဆန္ဒ တွေ အတိုင်း ၊ လာမဲ့ နှစ်တွေထဲမှာ မြန်မာပြည်ရဲ့ သမ္မတ ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖြစ်လာပြီး ၊ အမေရိကန် ရဲ့ သမ္မတ ဟာလည်း ၊ ဟီလာရီ ကလင်တန် ဖြစ်လာခဲ့မယ် ဆိုရင်တော့ . . . နှလုံးသား နဲ့ လုပ်တဲ့ နိုင်ငံရေး တွေဟာ ၊ စစ်ခရာသံ တွေ ပြန်လည် ဆူညံ လာတဲ့ ကမ္ဘာကြီးထဲမှာ မျှော်လင့်စရာ လူ့သမိုင်းတခု ဖြစ်လာဦးမှာပါ။
သြဂုတ် ၃၁ ၊၂၀၁၄
Ref: Hillary Rodham Clinton (2014). Hard Choice.
Weekly Eleven. No-47, Vol-9, Sep 08 2014.
Labels: Aung San Suu Kyi , Books , Burma story , People , Printed , Reviews
နိဂုံးလေး ဖတ်အပြီးမှာ ကြက်သီးတောင် ထသွားခဲ့တယ် မကေ။ အဲလိုဖြစ်လာရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲနော်။ ဒီလိုမှ ဖြစ်မလာခဲ့ရင် ရွှေပြည်တော် မျှော်လေတိုင်းဝေးနေဦးမှာကို တွေးပြီး စိုးကြောက်လာမိတယ်။း(
ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာ အမြင်တွေ ခံစားချက်ကလေးတွေ ထည့်ရေးသွားတော့ ဖတ်သူလည်း ပိုပြီး ဆွဲဆောင်မှု ရှိသွားတယ် ကျေးဇူး တီကေ
နှလုံးသားနဲ့ လုပ်တဲ့ နိုင်ငံရေး ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်က အစ ကြိုက်တယ် ကေ... မျှော်လင့်သလို ဖြစ်လာစေဖို့ အတူတူ ဆုတောင်းကြတာပေါ့... ကိုယ်တတ်နိုင်တာက ဆုတောင်းဖို့ပဲ မဟုတ်လား...